PEACEFUL PA: April 2015
Christian and Technology - ယုံကြည်သူနဲ့ နည်းပညာ
ဘာသာရေးမှာ စိတ်ထက်သန်သူတချို့ဟာ နည်းပညာ technology ကို အဆိုးမြင်တတ်တယ်။ ဒါတွေဟာ လောကီဆန်တယ်။ အချိန်ကုန်တယ်။ လူပျက်စီးတယ်လို့ မြင်ကြတယ်။ ဒီအယူအဆ မှန်၊ မမှန် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။
Amish people - အမေရိကားရှိ Ohio, Pennsylvania, Indiana ဒေသတွေမှာနေပြီး အစဉ်အလာကို ထိန်းချင်တဲ့ အုပ်စုတစုဖြစ်တယ်။ လူမျိုးတမျိုးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်ချက်တူတဲ့ လူတစုကို ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ နေထိုင်ပုံ ရိုးရှင်းတယ်။ ဝတ်စားပုံ ရိုးတယ်။ ခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေကို လက်မခံဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
လူဦးရေက ၂၀၁၀ ခုနှစ်အရ အမေရိကားမှာ ၂၄၉,၀၀၀ ခန့်ရှိတယ်။
ဘာသာစကားအနေနဲ့ ဂျာမန်စကား၊ Pennsylvania Dutch တွေကို သုံးကြပြီး၊ အရင်က ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဥရောပတိုက်သားတွေကို အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ် စသည်ဖြင့် မခွဲတော့ဘဲ ဘိုလို့ အလွယ်ခေါ်ကြသလို၊ Amish မဟုတ်တဲ့ သူတွေကိုတော့ လူမျိုးမခွဲတော့ဘဲ English တွေလို့ပဲ ရောပြီးခေါ်တတ်ကြတယ်။
Amish တွေဟာ အယူသည်းတဲ့ Cult တွေမဟုတ်ဘဲ ခရစ်ယာန်တွေသာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ ……
non-resistance အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းကို နှစ်သက်သူတွေဖြစ်တယ်။ စစ်မတိုက်ချင်ဘူး။ စစ်ထဲမဝင်ချင်ဘူး။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ ရဲလုပ်ငန်းကို သဘောမကျဘူး။
အစိုးရကျောင်းတွေကို မကြိုက်ဘူး။ Amish ကျောင်းတွေ သပ်သပ်ရှိတယ်။
အိမ်ဆောက်ရင် ခေတ်မှီနည်းပညာတွေမသုံးဘဲ လက်သမားအတတ်သင်ပြီးတော့ အများစုပေါင်းပြီး အိမ်ဆောက်ကြတယ်။
ခေတ်ပေါ်နည်းပညာ technology တွေမကြိုက်တဲ့အတွက် .... ကားဝယ်မစီးဘူး။ မြန်ဆန်တဲ့ နည်းပညာတွေဟာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို ဖြိုခွဲနေတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် မြင်းလှည်းကလေးတွေပဲ သုံးကြတယ်။ လျှပ်စစ်မီးမသွယ်ဘူး။ ရေဒီယို၊ T.V, ကွန်ပြူတာ မသုံးဘူး။
ဓါတ်ပုံ မရိုက်ကြဘူး။ ရုပ်တုကိုယ့်အဖို့ လုပ်တာ၊ အချည်းအနှီး ကျော်ဇောကိတ္တိကို ရှာတာလို့ ယူဆတယ်။
အဝတ်အစားကတော့ တခြားအရောင်းတွေ မသုံးဘဲ အဖြူနဲ့ အမဲပဲ သုံးကြတယ်။ အင်္ကျီမှာ ကြယ်သီးတွေ၊ ဇစ်တွေ၊ ကပ်ခွါတွေ မသုံးကြဘူး။ ကြွားဝါရာကျမယ်လို့ မြင်တယ်။
အသက် ၁၈ နဲ့ ၂၀ ကြားမှာ နှစ်ခြင်းခံဖို့၊ အသင်းတော်ထဲ ဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ယုံကြည်ချက်တူသူနဲ့ လက်ဆက်ကြတယ်။
ဒါတွေကို ကြည့်ရင် Amish တွေမှာ အားသာချက်တွေ ရှိသလို၊ အားနည်းမှုတွေလည်း ရှိတာတွေ့ရပါမယ်။ ရောင့်ရဲတဲ့စိတ်နဲ့ ယုံကြည်ချက်အတွက် တချို့အရာတွေ စွန့်လွှတ်ရဲတာဟာ လေးစားစရာပါ။ နည်းပညာကို စွန့်ပစ်ထားတာက ဝမ်းနည်းစရာပါ။
Amish တွေအကြောင်းကို စဉ်းစားတဲ့အခါ Technology ကို မကြိုက်တာဟာ ဘာသာရေး အယူဆိုတာထက် လူမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ preference (ပရက်ဖရင့်) အကြိုက်နဲ့ choice ရွေးချယ်မှု ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
၁ ကော ၅း ၁၀ “လောကီသားတို့နှင့် အလျဉ်းမပေါင်းဖေါ်ရဟု မဆိုလို။ ထိုသို့ဆိုလျှင် သင်တို့သည် လောကီမှ ထွက်သွားရကြမည်။”
Technology ဟာ အသုံးချခံပညာရပ်တခုသာဖြစ်ပြီး၊ မကောင်းမှုရဲ့ အခြေခံလို့ မယူသင့်ပါဘူး။
ဥပမာ။ ငွေကတော့ သုံးနေရမှာဖြစ်ပြီး ငွေကို တပ်မက်တဲ့စိတ်ကတော့ မကောင်းပါဘူး။ Technology ကို သုံးနေရမှာဖြစ်ပြီး၊ စိတ်ထားမကောင်းရင်တော့ အပြစ်ဖြစ်နေမှာပါ။
"ခံတွင်းမှထွက်သောအရာမူကား၊ နှလုံးထဲက ထွက်လာ၍ လူကိုညစ်ညူးစေသော အရာဖြစ်၏။ မကောင်းသောကြံစည်ခြင်း၊ လူ့အသက်ကို သတ်ခြင်း၊ သူ့မယားကို ပြစ်မှားခြင်း၊ မိန်းမလွတ်နှင့် မှားယွင်းခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာကို ခိုးခြင်း၊ မမှန်သော သက်သေကိုခံခြင်း၊ သူ့အသရေကို ဖျက်ခြင်းအရာတို့သည် နှလုံးထဲက ထွက်လာ၍၊ လူကို ညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏။” - မသဲ ၁၅း ၁၈- ၁၉။
- သမ္မာကျမ်းစာ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုခွင့်ရလာတယ်။ တချို့သူတွေ အရင်က စိုးရိမ်တာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ကျမ်းစာကို စာတန်က ဖျက်ဆီးပြီး ကမ္ဘာပေါ်ကနေ ပျောက်ကွယ်သွားစေချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျမ်းစာတအုပ်လုံး အလွတ်ကျက်ဖို့ နှိုးဆော်တာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အခု ဒီလို စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ဘူး။
ဓမ္မသီချင်း သံပုံစာအုပ်တွေ အလွယ်ရနိုင်သွားပြီ။
Commentary အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွေ၊ Concordance ကျမ်းညွှန်းစာအုပ်ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖုန်းတွေထဲမှာ လွယ်လွယ်ထည့်ထားနိုင်ပြီ။
ဝိညာဉ်ရေး စာစောင်တွေကို e-book တို့ Phone application အနေနဲ့ဖြစ်စေ ဖတ်ရှုဖို့ အခွင့်အရေး ရလာတယ်။
ကမ္ဘာတဝှန်းက ယုံကြည်သူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်လာနိုင်ပြီ။
ပညာရေးမှာလည်း နည်းပညာက အများကြီး အထောက်အကူပြုလာပြီ။ ကိုယ်သိချင်တဲ့ပညာရပ်တွေကို ကွန်ပြူတာနဲ့ အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပြီ။
ကျန်းမာရေးမှာ ရောဂါသဘာဝ၊ ဆေးဝါးနဲ့ အဟာရတွေကို ပိုပြီး လေ့လာသိရှိလာနေပြီ။ ဒါဟာ လူ့အသက်တွေကို ကယ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလန်းပဲလို့ မှတ်ယူသင့်ပါတယ်။
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တနေရာနဲ့တနေရာ သွားဖို့ လွယ်လာတယ်။
စိတ်ကောင်းလေးရှိဖို့သာ လိုပါတယ်။ technology က လွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁ကော ၁၀း ၃၁ “သင်တို့သည် စားသော်၎င်း၊ သောက်သော်၎င်း၊ မည်သည့်အမှုကို ပြုသော်၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထောက်၍ ခပ်သိမ်းသော အမှုကိစ္စကို ပြုကြလော့။”
Posted by Papa at 2:24 AM
Labels: ဘာသာရေး, ဆောင်းပါးတို
Great Men of God and How they served God ဘုရားသခင့်လူများ
ဘုရားသခင့် လူများနှင့် သူတို့ ဘုရားအမှုဆောင်ပုံ
၁။ ကျမ်းစာကျောင်းနဲ့ ဘွဲ့ဒီဂရီက အရေးမကြီးပါ။
D. L. Moody ဟာ ကျမ်းစာကျောင်း တက်ဖူးသူမဟုတ်ပါ။ The Sword of the Lord မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဒုတိယမြောက် အယ်ဒီတာ Dr. Curtis Hutson ဟာလည်း ကျမ်းစာကျောင်း မတက်ခဲ့ဖူးပါ။ အမေရိကရဲ့ ထိပ်တန်း တရားဟောဆရာ ၁၀၀ မှာ ၃၀ ကျော်ဟာ ကျမ်းစာကျောင်း မတက်ဖူးသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
D. L. Moody ဟာ သူဟာ ၅ တန်းလောက်အထိပဲ ကျောင်းနေခဲ့ရတယ်။ Congregational အသင်းတော်တခုမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် ကျမ်းစာအသိ နဲပါးနေတာကြောင့် တနှစ်လောက် ကြန့်ကြာနေခဲ့တယ်။ လက်တင်ရသူလည်း မဟုတ်ဘူး။ သူက အသံထွက်အတိုင်း စာလုံးပေါင်းတတ်တော့ သူရေးတဲ့ စာတွေ၊ တရားဟောချက် မှတ်စုတွေမှာ စာလုံးပေါင်းမှားတတ်သလို၊ သဒ္ဒါလည်း မှားတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် D. L. Moody ဟာ ၁၉ ရာစုရဲ့ ဧဝံဂေလိဆရာတပါးဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ် ၁ သောင်း၊ ၂ သောင်းလောက်ကို မကြာခဏ ဟောပြောရသူဖြစ်တယ်။ သူ့ဟောပြောမှု၊ ရေးသားမှုတွေကြောင့် လူသန်း ၁၀၀ လောက် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း ကြားခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူ့ကို ၁၉ ရာစုရဲ့ “Mr. Protestant” လို့ ဆိုကြတယ်။ အမေရိကတိုက်နဲ့ ဥရောပတိုက်ကြီး ၂ တိုက်ကို သြဇာသက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဘွဲ့ဒီဂရီနဲ့ ဝတ်ရုံတွေဟာ ဘုရားအမှုတော်မှာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း Woodrow Wilson ပြောပြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုရှိတယ်။ သူက "တခါက ကျွန်တော် ဆံသဆိုင်မှာ ထိုင်နေတယ်။ နောက်မှာ လူတယောက်ဝင်လာပြီး ထိုင်တယ်။ အခိုင်းအစေ တယောက်လို ခပ်ရို့ရို့လေး ဝင်ထိုင်တယ်။ ပညာမတတ်ပေမယ့် သူပြောသမျှ စကားတွေက သူ့ကို ဆံပင်ညှပ်ပေးနေတဲ့သူကို စိတ်ဝင်တစား ပြောပြနေတာပါ။ ပြောနေတာကတော့ အေးအေးဆေးဆေး သာမန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူပြန်သွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားရှိခိုးပြီးလို့ ပြန်လာသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။"
၂။ ဆာငတ်မှုနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု လိုတယ်။
“ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကို ဆာငတ်ခင်မွတ်သောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏။ အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ဝပြောခြင်းသို့ ရောက်ကြလတံ့။” - မဿဲ ၅း ၆။
Charles Spurgeon ဟာ ၆ နှစ်သားအရွယ်မှာ ဓမ္မခရီးသည်လို့ လူသိများတဲ့ The Pilgrim's Progress စာအုပ်ကို ဖတ်နေပြီ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက တနင်္ဂနွေနေ့ ဘုရားကျောင်းကအပြန် အဖိုးသင်းအုပ်ဆရာအိမ်မှာ အဖိုးနဲ့ ဆက်ပြီး ကျမ်းစာဆွေးနွေးကြတဲ့ သင်းထောက်တွေရဲ့ စကားဝိုင်းကို နားထောင်လေ့ရှိပါတယ်။ ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာ သင်းထောက်တွေနဲ့ ကျမ်းစာ ဆွေးနွေးနိုင်ပြီ။ ၁၇ နှစ်အရွယ်မှာ အောင်မြင်တဲ့ တရားဟောဆရာဖြစ်နေပြီ။ လန်ဒန် သူ့အသင်းတော်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ ဘုရားကျောင်းတက်ရဖို့ တပတ်အလိုမှာ လက်မှတ်တန်းစီရတယ်။ အသင်းသားတွေက ဧည့်သည်ကို ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဘုရားကျောင်းတက်ဖို့ နေရာမရကြဘူး။ ပြီးမှ တချိန် ပါဝင်ကြရတယ်။ သူ့ဒေသနာတွေကို အဲဒီခေတ် သတင်းစာတွေမှာ အပြေးအလွှား ထည့်ကြရတယ်။
သူ့ရဲ့ အဟောအပြောကောင်းတဲ့ ဆုကျေးဇူးက ထူးခြားတယ်။ သူငယ်ငယ်က ကယ်တင်ခြင်းတရား ကြားချင်ပုံကို ….”မြို့ထဲက ဘုရားကျောင်းမှန်သမျှ အကုန်တက်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကယ်တင်းခြင်းအကြောင်း ကောင်းကောင်း မဟောကြဘူး။ သူတို့ကိုတော့ အပြစ်မတင်ချင်ပါဘူး။ ဆရာတယောက်က ဘုရားသခင် ကြီးမြတ်ကြောင်း ဟောတယ်။ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြစ်ရှိသူတယောက် ကယ်တင်ခြင်းရချင်နေတာကို သူ့တရားက ဘာလာ လုပ်ပေးနိုင်ပါ့မလဲ? တခြားဆရာတယောက်က လေးစားစရာကောင်းတယ်။ သူက ပညတ်တော် အကြောင်းပဲ အမြဲဟောတယ်။ ဒါပေမယ့် မျိုးကြဲစေချင်တဲ့ နှလုံးသားကို သူက ထွန်ပဲထွန်နေတော့ ဘာလုပ်မလဲ? တခြားဆရာတယောက်ကတော့ လက်တွေ့ကျတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟောတာ နားထောင်တော့ ခြေထောက်မရှိတဲ့ လူတစုကို စစ်ချီဖို့ အမိန့်ပေးနေတာနဲ့ အတော်တူနေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? သူတက်တက်ကြွကြွ နိုးဆော်နေလည်း ကျွန်တော့အတွက် အလကားပဲ။” လို့ ထိထိမိမိ ပြောတတ်တယ်။
ဆာလံ ၂၃ - “သေမင်း၏အရိပ် လွမ်းမိုးသော ချိုင့်ထဲသို့ လျှောက်ရသော်လည်း ဘေးအန္တရာယ်ကို မကြောက်ပါ။” - ဆိုတော့ သူက - ဘယ်ကြောက်မလဲတဲ့။ ခွေးကိုသာ ကြောက်တာ။ ခွေးအရိပ်တော့ ဘယ်ကြောက်မလဲတဲ့။
George Muller ဟာ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ရာမှာ နာမည်ကြီးတယ်။ သူက ဘယ်မှာမှ အလှူမခံဘူး။ အလှူခံ မလွှတ်ဘူး။ လိုတာကို ကလေးတွေနဲ့ အတူဆုတောင်းတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက သူဟာ လူဆိုးလေးပါ။ အဖေက မယုံကြည်သူ။ သားက လူလိမ်လေး၊ သူခိုးလေးပါ။ ၁၄ နှစ်သားမှာ အမေဆုံးတယ်။ အမေသေလုဆဲဆဲအချိန်မှာ သားက လမ်းပေါ်မှာ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အရက်မူးနေတယ်။ ခိုးမှုနဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်မှာ ထောင်ကျတယ်။ အဖေက ပိုက်ဆံပေးပြီး ရွေးထုတ်ရလို့ သားကို ရိုက်ပြီး သားကို တခြားမြို့ ပို့လိုက်တယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ ကျမ်းစာသင်တန်းတခုကို အဖိတ်ခံရပြီး အသက်တာ ပြောင်းလဲလာတယ်။
မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် လိုသမျှကို ဆုတောင်းခဲ့တယ်။
တခါက သူနေတဲ့ Bristol မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိုးခေါင်တယ်။ ရေတွင်းတွေ ရေခန်းကုန်တယ်။ George Muller ကဆုတောင်းတယ်။ မိုးခေါင်းတဲ့ ကာလ တလျောက်လုံး ရေတွင်းမှာ ရေရှိနေလို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လယ်သမားတွေကို ရေပေးလှူ ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။
တမနက်တော့ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းမှာ စားစရာပြတ်တယ်။ မနက်စာ ဘယ်ကရမယ် ဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူး။ ကလေးတွေက ထုံးစံအတိုင်း မုန့်ရဖို့ တန်းစီနေကြပြီ။ တကယ်တော့ မုန့်ဘီဒိုတွေထဲမှာ ဘာမုန့်မှ မရှိဘူး။ မီးဖိုချောင်မှာလည်း မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် George Muller က ဘူး။ ဆုတောင်းပြီး ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းနေတယ်။ ပြီးတာနဲ့ တခါးခေါက်သံကြားရတယ်။ မြို့ထဲက မုန့်ဖုတ်သမားက မုန့်လာပို့တယ်။ ကြည့်ရတာ ညက အိပ်မက်မှာ ဘုရားက မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းကို မုန့်ပို့ခိုင်းလိုက်ပုံရတယ်။ ကလေးတွေအတွက် တပတ်စာ မုန့်ရလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ကျောင်းရှေ့မှာ နွားနို့ပို့တဲ့ ထရပ်ကားတစီး ပျက်လို့ရပ်လိုက်ရတယ်။ ကားစက်ပြန်မကောင်းခင် ကားပေါ်က နွားနို့တွေ ပျက်ကုန်မယ်လို့ အကြံပေးလို့ ကျောင်းကို လှူလိုက်ရတယ်။ ကလေးတွေ အဲဒီမနက် နွားနို့သောက်ရကြတယ်။
၄။ သနားကြင်နာတတ်ဖို့လိုတယ်။ - compassion
မဿဲ ၉း ၃၆။ “လူအစုအဝေးတို့ကို မြင်တော်မူလျှင် သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူမရှိဘဲ ပစ်ထားသော သိုးစုကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။”
အစ္စရေးမှာ လူတွေဟာ သိုးလို ထိတ်လန့်ကွဲပြားနေချိန်မှာ သိုးထိန်း ဒါဝိတ်ကို ပေါ်ထွန်းစေခဲ့ပါတယ်။
David Yone Moe
ဆရာဦးဒေးဗစ်ဟာ Papa of the Outcasts အပယ်ခံတွေရဲ့ ပါပါးလို့ ဆိုတယ်။
ဆရာဦးဒေးဗစ်က မူးယစ်ဆေးသမားတွေကို ရှိသမျှ ရောင်းချကျွေးခဲ့ရုံမက အပေါ့အလေး မထိန်းနိုင်သူတွေကိုပင် သည်းခံကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။ တချို့က နေ့စဉ် တကိုယ်ရည် ကိစ္စတွေကိုပင် ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အလေးအပေါ့ စွန့်တာကိုပင် မထိန်းနိုင်၊ မသိမ်းနိုင်တော့ဘူး။ အကူအညီလိုနေတယ်။
ဒီလိုလူတွေကို ကူညီဖို့ စေတနာလိုသလို၊
ခွန်အား အစွမ်းအစ လိုတယ်။
ဘုရားသခင့်လူတွေဟာ ရယူဖို့ မစဉ်းစားဘဲ ပေးလှူကူညီနေသူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်. ရဖို့ပဲ စဉ်းစားနေရင် စစ်မှန်တဲ့ အမှုတော်ဆောင် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Posted by Papa at 6:30 AM
Labels: Biography, တရား, အထုပ္ပတ္တိ
Great Men of God and How they served God ဘုရားသခင်...